मुख्य विशेष Archives - Page 238 of 249 - A complete Nepali news portal based on news & views
१७ श्रावण २०७४, मंगलवार ११:२५ August 2, 2017 Nonstop Khabar
झापा, १७ साउन । भुटानी शरणार्थीको हत्या गरी फरार एक अभियुक्तलाई १५ वर्षपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गत २०५८ फागुन २६ गते झापा खुदुनाबारी शिविर सेक्टर नम्बर एक हट नं ३१ का सन्तबहादुर अधिकारीलाई खुकुरी प्रहार गरेर हत्या गरी फरार भएका ताप्लेजुङ आम्वेगुदिन–५ का भीमबहादुर भट्टराईलाई प्रहरीले १५ वर्ष पाँच महिनापछि पक्राउ गरेको इलाका […]
आयल निगमको करोडौ अनियमिततामा सबै मौन
१७ श्रावण २०७४, मंगलवार १०:१० August 1, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडौं, १७ साउन । आयल निगमले जग्गा खरिदमा गरेको अनियमिततामा सरोकारवालानिकाय आश्चर्यजनक रूपमा मौन छन्। निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जग्गा किन्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको सार्वजनिक भए पनि सरोकारवाला निकायहरू आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग चुपचाप छन् । नियमअनुसार निगम सञ्चालक समितिमा आपूर्ति सचिव […]
काठमाडौंको एक स्कूलबाटै अपहरित बालकलाई प्रहरीले गर्यो काँडाघारीबाट उद्धार
१६ श्रावण २०७४, सोमबार १४:३१ August 1, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडौं, १६ साउन । काठमाडौंको पकनाजोलबाट अपहरणमा परेका बालकलाई प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको छ । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीले अपहरित बालक विशाल चौधरीलाई सकुशल उद्धार गरेको हो । पकनाजोलमा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा युकेजीमा अध्ययनरत बालक विशाल चौेधरीलाई यही साउन १२ गते अज्ञात समूहले अपहरण गरेको थियो । विद्यालयबाट घर […]
१६ श्रावण २०७४, सोमबार १०:३५ July 23, 2019 Nonstop Khabar
काठमाडौं, १६ साउन । नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीले करोडौं रुपैयाँ कमिसन खान सरकारी जग्गा प्राप्तिका लागि पहल नै नगरी निजी जग्गा किनेको भेटिएको छ। सार्वजनिक जग्गा नपाएर निजी जग्गा खरिद गरेको बताउँदै आएको निगमले एजेन्टसँग सेटिङ मिलाएर जग्गा किनेको तथ्य फेला परेको हो। २०७३ मंसिर २७ गतेदेखि निजी जग्गा खरिद गर्न टेन्डर गरेको निगमले […]
काठमाडाैं, १६ साउन । चीनले आफ्नो स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका १४ सय किलोमिटरका विभिन्न नाका खोल्न र नेपालतर्फको सडकखण्ड निर्माण गर्न तयार रहेको जनाउ दिएको छ। साता लामो तिब्बतयात्रापछि फर्किएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चीन सरकार र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासँगको छलफलमा त्यस्तो प्रस्ताव आएको जनाए । ओलीले आइतबार पार्टीको […]
सर्वोच्चको आदेशप्रति एमालेको कडा टिप्पणी
१६ श्रावण २०७४, सोमबार ०२:०० July 31, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडौं, १५ साउन । सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नं. १९ मा फेरि मतदान गराउन दिएको आदेशप्रति नेकपा एमालेले कडा टिप्पणी गरेको छ । सर्वोच्चको यो फैसलाले राज्यमा नागरिक सर्वोच्चता र जनताको जनमतलाई अपमान गरेको भन्दै एमालेले यो आदेश दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताएको छ । एमालेका सचिव तथा प्रचार विभाग इन्चार्ज योगेश भट्टराईले सर्वोच्चको फैसलाले […]
चीन र भारतका कुटनीतिज्ञ किन एकाएक लुम्बिनीमा ओइरिए ?
१५ श्रावण २०७४, आईतवार ११:२९ July 31, 2017 Nonstop Khabar
रुपन्देही, १५ साउन । चीन र भारतबीच सीमा विवाद चर्किरहँदा यता नेपालमा भने दुबै देशका कुटनीतिज्ञ एकाएक लुम्बिनीतिर ओइरिन थालेका छन् । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा दुबै देशका कुटनीतिज्ञहरुदेखि दुबै देशका माथिल्लो ओहोदाका अधिकारीहरुले निरन्तर लुम्बिनी पुग्दै फर्कदै गर्ने गरेका छन् । यसैबीच फेरि चीन र भारतका उच्च तहका कुटनीतिज्ञहरु लुम्बिनीमा देखा परेका छन् । […]
१४ श्रावण २०७४, शनिबार ०३:०९ July 30, 2017 Nonstop Khabar
काठमाडौं, १३ साउन । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल र उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको संघीय समाजवादी फोरमका बीचको एकता टुंगिएको छ । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ शक्तिका केन्द्रीय संयोजक डा. भट्टराईले यसबारे प्रष्ट पारेका हुन् । डा. भट्टराईले सिद्धान्त, पार्टीको नाम, संगठन संरचनालगायतका विषयमा कुरा नमिल्दा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी […]
प्रचण्डलाई आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गर्न विप्लवको सुझाब
१३ श्रावण २०७४, शुक्रबार २२:२० July 23, 2019 Nonstop Khabar
काठमाडाैं, १३ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड”लाई अाफ्नाे पार्टीमा प्रवेश गर्न सुझाब दिएका छन् । महासचिव विप्लवले प्रचण्डलार्इ नेकपा (माअाेवादी केन्द्र) विघटन गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्न सुझाब दिएका हुन् । माअाेवादी केन्द्रका अध्यक्ष रहेका प्रचण्डले अाफ्नाे पार्टीकाे बैठकमा अाफ्नाे पार्टी बन्न नसकेकाे भन्दै विघटन गर्न प्रस्ताव […]